Bit By Bit - Mass ngokubambisana - Imisebenzi
[ , , ] Enye yezinto izimangalo yamaprojekthi kusukela Benoit et al. (2015) on isixuku-esephepheni of manifestos sezombusazwe ukuthi sithola imiphumela reproducible. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) inikeza ukufinyelela Manifesto Corpus. Zama nokuzala Fig 2 Benoit et al. (2015) ngokusebenzisa abasebenzi Amazon Mechanical Turk. Zazinjani efanayo imiphumela yakho?
[ ] In the project InfluenzaNet panel sokuzithandela abantu ukubika izehlakalo, ukwanda, futhi befuna impilo ukuziphatha ezihlobene umkhuhlane-like-nokugula (ili) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Baqhathanise nokwehluka design, izindleko, kanye namaphutha cishe ngo InfluenzaNet, Google Flu Amathrendi, futhi bendabuko umkhuhlane ngomkhondo izinhlelo.
Cabanga ngalesi sikhathi nokwethuka, ezifana wezingulube umkhuhlane kokugqashuka. Chaza amaphutha kungenzeka ohlelweni ngamunye.
[ , , ] The Economist umagazini onke wezindaba. Dala womuntu kathisha project ukubona uma isilinganiso abesifazane amadoda ekhaveni liye landa ngokuhamba kwesikhathi.
Umagazini ungaba nesembozo esihlukile ezindaweni eziyisishiyagalombili ezahlukene (Afrika, Asia Pacific, eYurophu, i-European Union, Latin America, Middle East, North America, kanye United Kingdom) futhi kungaba wonke kulayishiwe kusuka website ye -Economist . Khetha eyodwa yalezi zindawo, enze analysis. Qiniseka ukuchaza izinqubo yakho ngemininingwane eyanele ukuthi bangabizwa ziphindaphindwe ngothile.
Lo mbuzo laphefumulelwa umsebenzi ofanayo Justin Tenuto, usosayensi idatha enkampanini Ukuthumela CrowdFlower , bheka "Isikhathi Magazine Ukuthandwa Ngempela Dudes" .
[ , , ] Ngokwakha umbuzo ongenhla, manje enze analysis for zonke izifunda ayisishiyagalombili.
Yini umehluko ingabe ezindaweni?
Singakanani extra isikhathi nemali kwamthatha ukukhuphula izinga analysis yakho kuwo wonke eziyisishiyagalombili izifunda?
Cabanga nje ukuthi Economist has nesembozo esihlukile 100 isonto ngalinye. Linganisa kwakuyoba singakanani isikhathi esengeziwe kanye nemali kuthathe ukukhuphula izinga analysis yakho ukuze nesembozo 100 ngeliviki.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) iyinhlangano website elibamba call evulekile amaphrojekthi. Bamba iqhaza omunye walabo amaphrojekthi.
[ ] Bheka ngokusebenzisa esasikumagazini owawusanda kuphuma a iphephabhuku ensimini yakho. Ingabe ikhona amaphepha mafutha ngabe reformulated njengoba ucingo evulekile amaphrojekthi? Kungani uthi yebo noma cha?
[ ] Purdam (2014) wachaza basakaza iqoqo idatha mayelana nokucela eLondon. Fingqa le izimfanelo ezinhle nobuthakathaka babantu lo mklamo ucwaningo.
[ ] Redundancy kuyindlela ebalulekile ukuze kuhlolwe izinga basakaza iqoqo idatha. Windt and Humphreys (2016) ukuthuthukisa futhi avivinye uhlelo ukuqoqa imibiko yezimpi izenzakalo ezivela zabantu eMpumalanga yeCongo. Funda leli phepha.
Kusho design yabo iqinisekisa kanjani komsebenzi?
Zinikeza eziningana ukuqinisekisa idatha eqoqwe project yabo. Uwachaze. Yikuphi kwaba obugculisa kunabo kuwe?
Phakamisa indlela entsha ukuthi idatha babengase sasebenza. Iziphakamiso kufanele azame ukwandisa ukuzethemba okuthile obungeke ukuthole babe in the idatha ngendlela okusho engabizi futhi zokuziphatha.
[ ] Karim Lakhani kanye nozakwabo (2013) wadala ucingo evulekile ukuzicelela ubuchule ukuxazulula inkinga eziphilayo yezamakhompyutha. They wathola okuthunyelwe okungu-ezingaphezu kuka-600 aqukethe 89 inoveli kusondela yezamakhompyutha. Of izethulo, bathola 30 ukuthi leqe ukusebenza we-US National Institutes of Health MegaBLAST, futhi ukuzithoba kancono kokubili lokhu akwenze ngokunemba okukhulu kanye nesivinini (ngokushesha izikhathi 1,000).
Funda iphepha, bese phakamisa inkinga ucwaningo social ukuthi angasebenzisa uhlobo olufanayo umncintiswano evulekile. Ikakhulukazi, lolu hlobo emncintiswaneni evulekile igxile usheshisa futhi ngcono ukusebenza algorithm ekhona. Uma ungazazi inkinga kanje insimu yakho, zama ukuchaza ukuthi kungani hhayi.
[ ] Kathisha amaphrojekthi abaningi babantu ancike ababambiqhaza Amazon Mechanical Turk. Ngena ngemvume-up to abe isisebenzi on Amazon Mechanical Turk. Chitha ihora elilodwa ukusebenza khona. enza lokhu nomthelela imicabango yakho mayelana nomklamo, ukhwaliti, futhi izimiso compuation amaphrojekthi womuntu kanjani?